Tweetbot 6 ikozvino yawanikwa neitsva maficha uye kunyoreswa sisitimu | IPhone nhau
Twitter ndeimwe ye makuru masocial network wenyika nhasi. Mune ino pasocial network, tarisiro mumakore achangopfuura yanga iri panhau dzenhema uye zvemukati zvisina chokwadi. Chinangwa ndechekuti pasocial network haina kuzova mushambadzi wenhau dzenhema dzinowedzera simba rekupokana zvisina maturo kana dzidziso. Kuti uwane Twitter kubva kune yako iOS kifaa, une chirongwa chepamutemo nenhau dzese dzakabatanidzwa, nekuti zvinobva kukambani zvakananga. Nekudaro, nhasi yaburitswa Tweetbot 6, chizvarwa chechitanhatu a mutengi wenzvimbo iyi yemagariro inova yazvino uno, inotora mabasa epamutemo API v2 uye inouya nayo a nyowani yekunyorera system.
6,50 euros pagore, mutengo weTweetbot 6
Tweetbot mutengi weTwitter yeIOS neMac.Iyi vhezheni yeEastern Access yeIOS inoshandisa iyo itsva Twitter API. Isu tinoidaidza kuti Kuwana Pakutanga nekuti pane zvakawanda zvitsva maficha pamepu pedu zvinoda kugadzirwa, pamwe nemaAPIs matsva ekuti vatevedze sekuti Twitter inoita kuti iwanikwe. Tweetbot 6 ine zvese maficha anowanikwa mushanduro 5 uye nezvimwe.
Tweetbot 6 yatove chokwadi. Pakupedzisira mutengi uyu anowana iyo v2 yeiyo Twitter API ine mabasa makuru senge makadhi kana ongororo zvinogamuchirwa. Icho chikonzero chekuti vhezheni yapfuura yanga isina mabasa aya inyaya yemakanika ayo Twitter ane ekupa pekutanga kune iyo API inoshandiswa nevechitatu-bato vagadziri kwechinguva.
Twitter yatanga chirongwa chayo che "Birdwatch" kurwisa zvisizvo
Naizvozvo, Tweetbot 6 rine dzese nhau dzeTweetbot 5 kuwedzera kune izvi zvitsva maficha:
Gadzira manotsi pane mamwe ma profiles emushandisi
Gadzira 'tweet madutu'
Columns (iPad chete): TweetDeck maitiro
Chiedza uye nerima theme
Vagadziri vanoona kuti mabasa matsva achauya mune ramangwana sezvo iyo Twitter API v2 ichivandudzwa. Uye zvakare, yakaverengerwa chirongwa chekunyorera. Nesununguko vhezheni iwe unogona chete kuverenga tweets iwe uchibhadhara 6,50 euros pagore kana 1 euro pamwedzi unogona kuwana mamwe ese mabasa.
Tweetbot 6 ye Twittervakasununguka
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Tweetbot 6 ikozvino yave kuwanikwa nezvitsva maficha uye yekunyorera system
Kunyorera? Ivo havape chero chinhu chakakodzera kutsigira mutengo. Zvirinani ndigare neshanduro yechishanu uye ndinokushuvira rombo rakanaka neyakaunganidzwa yako modhi.
Pindura kuna JohnyC